सेतो सर्ट | Jukson
थोत्रो नोकिया फोन एक बिहानै बज्न थाल्यो ,हिजो अबेर सम्म काम गरेकोले मलाई निन्द्रा पुगेको थिएन,त्यही पनि जसो तसो आँखा मिचेर फोन हेर्दा नयाँ नम्बर थियो । फोनको रिसीब बटन थिच्ने बितिकै उता एउटा चिर परीचित महिलाको आवाजमा भनिन् "हेल्लो मलाई चिन्नु भयो ? म छांया" उनको आवाज सुन्ने बितिकै एक छिन अचम्मित भएँ अनी बोल्न सुरु गरेँ "अ भन्नुस्" । "आज मेरो बिहे छ सबै हतारमा भयो कार्ड दिन ढिला भयो,जसरी नि आउनु है ?" उसले भनी । मैले हुन्छ भनेर फोन राखी दिएँ। हुन त त्यो दिन एउटा नव विवाहित जोडीको कपल फोटोसुटको लागि छुटाएको थिएँ तर त्यो फोन कल आवाज बिहेको निम्तो नकर्न सकिनँ।
फोन राखी सकेपछी एकाएक पुरना कुराहरु मगजमा खेल्न थाले। उनी त्यही छांया थिइन् , जो एक बर्ष अगाडि मबाट ओझेल भएकी थिइन् । उनी सँगको सम्बन्ध भत्किसके पछी आज धेरै दिनमा उनले फोन गर्दा खुशी अनी दु:ख को समिस्रन भाब उर्ली रहेको थियो ।सबैलाई चिच्याएर भन्न मन थियो तर सकिनँ । शायद म सँगको उसको भबिस्य अन्धकार देखेर नै होला उनले लाहुरे रोज्दै छ भन्ने हल्ला कता कता सुनेको थिएँ । साह्रै सौखिन उनी शायद माज्डा चाढ्ने बानी परेको थियो ,अनी किन चढोस् मेरो १२५ सिसीको हिरो होन्डा स्पिलिन्डर । यस्तै यस्तै कुरामा सम्बन्ध बिग्रेको थियो ।
बिगत जस्तो भएपनी उनले सम्झेर फोन गरिसके पछी जानु पर्छ भन्ने सोचेँ। जानु अगाडि उनीसँग डेट जाँदा लगाइ राख्ने पुरानो सेतो सर्ट लगाएँ हुन त मसँग नयाँ सर्ट पनि थियो तर खासै पहिला जस्तो १० वटा सर्ट पालो पालो लगाएर ऐना हेर्ने मन लागेन । निस्किनु अगाडि एक्चोटी फोन गरेँ।
विवाह हलमा पुगिसके पछी मेरो आँखाहरु उनी कहाँ छिन भनेर दौडिन थाले । उनलाई देखे पछी उनको समिप गएर दुबैलाई बधाई दिएँ। केही बेर बसिसके पछी त्यहा बस्नै सकिनँ बिदा माग्दै फर्कीहालेँ । नाकाबन्दीको असर, पेट्रोल सर्टएजले गर्दा मैले मोटर साइकाल निकालेको थिएन। चोकमा बस कुर्दै गर्द फोनमा एउटा मेसेज आयो मेसेजपनी उनैको रहेछ,"तपाइले अझै याद रहेछ त मेरो फेबरेट कलर सेतो। सेतो सर्ट अती राम्रो देखिनु भएको थियो । सेतो लगाएर इम्प्रेस पार्न खोजेको हो ? " त्यही बेला बस आयो महेन्द्रपूल जानलाई बस चढेँ अनी रिप्लाई लेखेँ "थाहा छ, तिम्रो फेबरेट कलर सेतो भनेर तर इम्प्रेस पार्न तिम्रो बिहेमा सेतो सर्ट लगाएको हैन,यो त मैले तिम्रो मेरो मायाको अन्तिम काजकृयामा सेतो लगाएको हुँ । मेरो समाजमा आफ्नो प्रिया मान्छे गुमाउदा सेतो लगाउने चलन छ त्यही अनुसरण गरेको हुँ ।" यती भनीसकेपछी सिम निकालेर फाल्दिएँ।
काठमाडौंमा सोहेलको प्रेस मिट, के भने ?